တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံမှပြန်လည်ရောက်ရှိ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံမှပြန်လည်ရောက်ရှိ
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃
လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lieutenant General Chansamone CHANYALATH ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သို့ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် လာအိုနိုင်ငံ၊ ပတ်ဆေးလေဆိပ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှ ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုနိုင်နှင့်ဇနီး၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ)ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ကျော်မင်း နှင့်ဇနီး၊ ချန်ပါဆပ်ပြည်နယ်စစ်ဌာနချုပ်မှူး Brigadier General Sukai Phimmasan နှင့်ဇနီး၊ လာအိုတပ်မတော်အရာရှိကြီးများက လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ယင်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သည့်မြန်မာ့ တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိကြရာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့်ဇနီး ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးနှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလာအိုနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG နှင့်ဇနီး၊ လက်ထောက် စစ်သံမှူး Lieutenant Colonel Latsamy KEOMIXAY နှင့်တာဝန်ရှိသူများကလေဆိပ်တွင်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် လိုက်ပါသွားသည့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦးနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ခင်လှိုင် တို့ပြန်လည်လိုက်ပါလာသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျော ခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ လာအိုပွညျသူ့ဒီမိုကရကျတဈ သမ်မတနိုငျငံမှပွနျလညျရောကျရှိ
လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီး Lieutenant General Chansamone CHANYALATH ၏ ဖိတျကွားခကျြအရ လာအိုပွညျသူ့ဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံ သို့ခဈြကွညျရေးခရီးရောကျရှိနသေညျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသော မွနျမာ့တပျမတျော ခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ လာအိုနိုငျငံ၊ ပတျဆေးလဆေိပျမှ ပွနျလညျထှကျခှာကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ဇနီးဒျေါကွူကွူလှ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျော ခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား လာအိုနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျကွီး ဦးကိုကိုနိုငျနှငျ့ဇနီး၊ မွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊လေ)ဗိုလျမှူးကွီး ကြျောကြျောမငျး နှငျ့ဇနီး၊ ခနျြပါဆပျပွညျနယျစဈဌာနခြုပျမှူး Brigadier General Sukai Phimmasan နှငျ့ဇနီး၊ လာအိုတပျမတျောအရာရှိကွီးမြားက လဆေိပျတှငျ ပို့ဆောငျနှုတျဆကျကွသညျ။
ယငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ဇနီး ဦးဆောငျသညျ့မွနျမာ့ တပျမတျောခဈြကွညျရေး ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ နပွေညျတျောလဆေိပျသို့ရောကျရှိကွရာ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးနှငျ့ဇနီး ဒျေါသနျးသနျးနှယျ၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦးနှငျ့ဇနီး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (လေ)ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျောနှငျ့ဇနီး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ နပွေညျတျောတိုငျးစဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာလာအိုနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG နှငျ့ဇနီး၊ လကျထောကျ စဈသံမှူး Lieutenant Colonel Latsamy KEOMIXAY နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားကလဆေိပျတှငျကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ အဖှဲ့ဝငျမြားအဖွဈ လိုကျပါသှားသညျ့ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ၏ဇနီးဒျေါကွူကွူလှ၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး သနျးထှနျးဦးနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ တွိဂံဒသေတိုငျးစဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျခငျလှိုငျ တို့ပွနျလညျလိုကျပါလာသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား ချန်ပါဆပ် ပြည်နယ် စစ်ဌာနချုပ်မှူး Brigadier General Sukai Phimmasan က ဂုဏ်ပြု ညစာစားပွဲဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံ